Asa maitso: nahazo fanohanana ny tanora nahavita fikarohana | NewsMada
Asa maitso: nahazo fanohanana ny tanora nahavita fikarohana
Ny volana jona lasa teo, nanao fihaonambe iraisam-pirenena momba ny tanora sy ny asa maitso ny OIF (Organisation internationale de la francophonie). Nampitaina tamin’ireo tanora nandray anjara ny fanodinana fako, ny fiompiana tantely, ny fambolena, sns, ao anatin’ny asa atao miaro ny tontolo iainana.
Nandritra io fotoana io ny fampihaonana ireo tanora ireo tamina mpandraharaha sy mpamatsy vola samihafa, mety ho mpanohana ny tetikasa haroson’izy ireo.
Maro tamin’ireo tanora 200 ny nitondra tetikasa amin’ny sehatry toekarena mifandraika amin’ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara sy aty amin’ny ranomasimbe Indianina. Nisy ny fampisehoana, ny fanofanana, ny fifanakalozan-kevitra. Nanaovana famelabelaran-kevitra momba ny fiovan’ny toetr’andro, ny fampandrosoana maharitra, sy ny famoronana asa.
Nampahafantatra ny tetikasan’izy ireo ny tanora telo avy any amin’ny farira Diana, ny faritra Sava, sy ny faritra Sofia (tambajotra DSS), nahazo fanohanana teknika sy famatsiam-bola avy amin’ny WWF.
Iray amin’ireo tanora ireo Ravavisoa Jauriette, nahazo 3 000 euros (12 tapitrisa ariary), avy amin’ilay fikarohana vitany momba ny fampiasana « hibiscus sabdariffa », zavamaniry any avaratra, azo avadika ho zava-pisotro na « confiture ». Ho an’ny fahasalamana ihany koa io karazan-javamaniry io, manampy amin’ny sakafo.
I Anjaharimisa Randrianarivelo Noël, avy any avaratra ihany, nampiseho fitaovana fitrohana rano, tsy ilana herinaratra, manondraka velaran-tany volena. Afaka mampiasa azy io ny tantsaha rehetra, fitaovana mora vidy sy mora kojakojaina. Nahazo fanohanana ho fampandehanana ny asa ny tetikasa folo tsara indrindra.
Nilaza ny ao amin’ny WWF fa betsaka ny tanora malagasy mahavita asa fikarohana tsara, saingy tsy ampy fanohanana. Tokony hijery sy hanohana azy ireny ny minisiteran’ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika; ny minisitreran’ny Tontolo iaianana sy ny fampandrosoana maharitra, mba hisy tetibola ho an’ny fampandrosoana maharitra marina miainga avy amin’ny fikarohana vitan’ireo tanora ireo.